के तपाईको छाला घामले डडेको छ ? त्यसो हो भने यी घरेलु उपचार अपनाउनुहोस् र छुटकारा पाउनुहोस् - ज्ञानविज्ञान
के तपाईको छाला घामले डडेको छ ? त्यसो हो भने यी घरेलु उपचार अपनाउनुहोस् र छुटकारा पाउनुहोस्
गर्मी सुरु भएको छ। घाममा डढेर छाला कालो हुनबाट बच्न निकै कठिन समय। चर्को घामले छालामा पर्ने प्रभाव घटाउने वा बच्ने उपायको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। बजारमा पाइने क्रिम तथा लोसनको सट्टा घरमै उपलब्ध हुनसक्ने प्राकृतिक साधनहरुको प्रयोग गरेर छाला कसरी बचाउने पढ्नुस्ः
प्रशस्त पानी पाइने यो फल रिफ्रेसिङ हुन्छ। यसको प्रयोग डढेको छालाको लागि उपयुक्त हुन्छ। यसको सेवन गर्दा शरीरले एन्टीअक्सिडेन्ट त पाउँछ नै डढेको छालामा काँक्रोलाई पातलो गरी काटेर लगाउँदा राम्रो प्रभाव पार्दछ।
चिसो दुध छालामा लगाउँदा यसले एक सुरक्षात्मक तह बनाइदिन्छ। साथै छाला सम्बन्धी इन्फेक्सनबाट पनि बचाउँछ। थोरै दुधमा सफा कपडा भिजाए घामले डढेको छालामा प्रयोग गर्दा राम्रो प्रभाव देखिन्छ।
एलोभेरा अर्थात घ्युकुमारी छालाको लागि हरेक तवरले उत्कृष्ट मानिन्छ। घामले डढेको छाला शितल बनाउन यो भन्दा राम्रो अर्को कुनै प्राकृतिक उपाय हुन सक्दैन। यसले छालाका कोषिकालाई तन्दरुस्त राख्ने, आद्रता कायम राख्ने देखि डन्डिफोरसम्म कम गर्छ।
महले छालाको आद्रता कायम राख्दछ। सुन्निएको, खस्रो भएको वा डढेको छालामा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसले छालालाई चाहिने आवश्यक तत्वहरु परिपूर्ति गर्छ। यसको एन्टीब्याक्टेरियल गुणको कारण इन्फेक्सनको सम्भावना घट्छ। आवश्यक ठाउँमा मह लगाएर कुनै सफा कपाडाले त्यस क्षेत्र ढाक्ने वा बेर्ने गर्नुस्।
नरिवलको पानीले शरीरमा जस्तो राम्रो प्रभाव पार्छ, नरिवलको तेलले छालामा त्यस्तै गज्जवको प्रभाव पार्छ। डढेको छालामा नरिवलको तेलले मालिस गर्नुस्। यसले छालाको चमक बढाउँछ अनि छालाको गुणस्तर बढाउँछ।
तपापनि ईंलाई छालाको रोग छ कि ?
छालाको रङ कस्तो छ भन्नेमा भन्दा पनि कसरी उसले आफ्नो छालाको हेरचाह गरेको छ भन्ने कुराले अधिक अर्थ राख्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।नेपालमा बढी देखिने पाँच रोगमध्ये एक छालासम्बन्धी भएको छालारोग विशेषज्ञ डा। रविन्द्र बास्कोटा बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुहुन्छ, “नेपालमा छाला रोगको समस्या धेरै छ । कूल जनसंख्याको २५ प्रतिशतमा कुनै न कुनै र पाँच प्रतिशतलाई कडा खालको रोग छ जसको तत्काल उपचार जरुरी छ ।”
आफ्नो छालाको ख्याल राख्नु सुन्दरतासँग मात्र नभएर उसको स्वास्थ्यसँग पनि उत्तिकै जोेडिएको विषय हो भन्नुहुन्छ छालारोग विशेषज्ञ प्राडा सविना भट्टराई ।
“बजारमा पाइने महँगा क्रिम लगाएर मात्र राम्रो भइँदैन, त्यसका लागि सन्तुलित खाना, पर्याप्त पानी सेवन तथा निद्रा र नियमित व्यायाम सबै आवश्यक हुन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
सन्तुलित र सही तरीकाले छालालाई स्याहार्न जानियो भने स्वस्थ र सुन्दर रहन सकिने डा भट्टराई बताउनुहुन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाका बहिरङ्ग सेवामा उपचारार्थ आउनेमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत छालाका समस्याबाट पीडित हुन्छन् ।
डा बास्तोला भन्नुहुन्छ, “हामीले छालाका समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिने गरेकाले छालामा विभिन्न एलर्जी हुने, दागधब्बा आउने, उमेरभन्दा अगावै बूढो देखिने, चाउरी पर्ने, अनुहार तथा कपाल सुक्खा हुने र छालाको सौन्र्दयपन हराएर जानेजस्ता समस्या बढ्दै गएको छ ।’’ छालाका समस्यालाई सामान्य ठानियो र समयमै सही उपचार गरिएन भने त्यसले पछि क्यान्सरको रुप लिन सक्ने खतरा पनि रहन्छ ।
“छालाको समस्या बढ्दै गएमा वा धेरै घाममा काम गर्ने व्यक्तिमा छालाको क्यान्सर देखिन पनि सक्छ,” डा भट्टराई भन्नुहुन्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका चर्म तथा यौन रोग विभागका पूर्व प्रमुख प्राडा दिनेशविनोद पोखरेलका अनुसार वातावरणीय प्रदूषण, अस्वस्थकर खानपान र जथाभावी औषधिको प्रयोगलगायतका कारण छालाका समस्या बढेर गएको छ । उहाँका अनुसार दाद, संक्रमण, डण्डीफोर, चायाँपोतो, कत्ले रोग र दुबी बढी देखिने समस्या हुन् ।
मुख्य छालाका समस्या
त्यसबाहेक शरीरभित्रैबाटै हुने समस्याले पनि जनै खटिरा, छालाका एलर्जी जस्ता छालाका समस्या निम्ताउँछ । मासुको सेवन, धुलो, अत्तर, अण्डा र गन्धको एलर्जीले छालामा समस्या हुन्छ । कसैलाई क्रिमकै एलर्जी हुनसक्छ । कसैलाई घाम र जाडोेको एलर्जी हुन्छ । यी समस्याको बेवास्ता गरियो भने त्यसले पछि ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ ।
सुन्दरता बढाउन र सामान्य ठानेर आफंै औषधि किनेर खाने, बजारमा पाइने जुनसुकै क्रिम र लोसन प्रयोग गर्ने बानी नबसाल्ने सुझाव चिकित्सकहरु दिन्छन् ।
छालाको ख्याल गर्न अनुहारमा सुहाउँदो घामबाट बचाउने सन ब्लक, सनस्क्रिन क्mिमहरु लगाउने, प्रशस्त पानी पिउने र छालालाई चिल्लो ९मोइस्चर० बनाएर राख्ने गर्नुपर्छ । सनस्क्रिनले कति समयसम्म काम गर्छ भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्छ । हरेक तीन घण्टाको फरकमा अनुहारको छालाको प्रकृति हेरी विशेषज्ञको सल्लाहमा सनस्क्रिम लाउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
Don't Miss it अनुहार चाउरी पर्न थाल्यो ? यी फलफूलले चाउरीपन हटाई अनुहार आकर्षक बनाउन गर्दछ
Up Next ढाड दुख्नेदेखि मुर्छा पर्नेसम्म अचूक औषधि कपुरको फाइदै फाइदा
व्रोइलर पाल्दा प्रत्येक सप्ताह विचार गर्नुपर्ने कुराहरु (साप्ताहिक तालिका सहित )
आत्मनिर्भरतर्फ उन्मूख कुखुरा पालन व्यवसायमा हजारौं किसान सहभागि भएको पाईन्छ । तर, उचित ज्ञान नहुँदा कुखुरा पालन व्यवसायबाट अधिकांश किसान…
कसरी गर्ने माछापालन ? कृषकले जान्नै पर्ने कुरा
माछा पूर्णरूपमा पानीमा बस्ने जीव हो । माछा स्वच्छ पानी तथा समुद्रको नुनिलो पानीमा पनि पाइन्छन् । स्वच्छ पानीमा पाइने…
नङ पालिस लगाउँनु अहिलेको मात्र होइन, निकै समय पहिले देखिको फेसन हो । महिलाहरुलाई सौन्दर्यका लागि अनेक प्रशाधनहरु चाहिन्छन् ।…